Muvhuro, March 16, 2020 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Sezvo kudzimwa kwaWunderlist kwakaitwa zviri pamutemo, vashandisi vazhinji vanga vachikurumidza kutsvaga imwe nzira. Zviuru zvakatoratidza kuora moyo kwavo munzira dzazvino, ndosaka Zenkit yakafunga kugadzira Zenkit Kuita Kuti vashandisi veWunderlist vanzwe zviri pamba. Hazvisi zvisingatarisirane nemaitiro eapps yavo uye intuitive interface yakafanana neWunderlist. Anhasi maapplication anogona kunge ari nyore zvinyorwa (senge Wunderlist, Todoist, kana MS To Do) kana yakaoma projekiti manejimendi
Chitatu, July 31, 2019 Chipiri, July 30, 2019 Douglas Karr
Mwedzi mishoma yapfuura, ndanga ndichibatsira kuvandudza uye kubatanidza yakasarudzika WordPress muenzaniso kune mutengi. Izvo chaizvo zviyero zvekushongedza, kuwedzera WordPress kuburikidza netsika minda, yakasarudzika post mhando, dhizaini dhizaini, theme yemwana, uye tsika plugins. Chikamu chakaoma ndechekuti ndiri kuzviita kubva nyore mockups kubva kune yekudyara prototyping chikuva. Kunyange iri chikuva chakasimba chekuona uye dhizaini, hazvishandure nyore kuHTML5 neCSS3.